Nzira Yokuwana Duplicate Files muLinux uye Vabvise
Muchidimbu: FSlint chimbo chikuru che GUI chekutsvaga mafaira mu Linux uye oabvisa. FDUPES inowanikwawo mafaira ane zita rimwechete muLinux asi mumutemo wemirairo.
Kana iwe uine tsika iyi yekudzikinura zvinhu zvose kubva pawebhu iwe sai, iwe uchaguma uine multiple multiple file files. Kazhinji kacho, ndinogona kuwana nziyo dzakafanana kana boka rezvifananidzo mune zvinyorwa zvakasiyana-siyana kana kupedzisa kubatsirana mamwe mafaira munzvimbo mbiri dzakasiyana. Kutambudzika kunowanikwa idzi zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa uye zvichivabvisa kuti vadzorezve disk space.
Kana iwe uchida kuzviponesa kubva mukurwadziwa uku, pane dzakasiyana-siyana Linux zvidzidzo zvingakubatsira pakuwana idzi zvinyorwa zvinyorwa uye kuvabvisa. Muchikamu chino, tichaona kuti ungawana nekubvisa sei mafaira aya kuBuntu.
Cherechedza: Unofanira kuziva zvauri kuita. Kana uri kushandisa chigadziro chitsva, nguva dzose zviri nani kuzviedza muhutano hwehuwandu hwemashoko kuti uone zvazvinoita usati watora iyo kumidzi kana kumusha faira. Uyewo, Zvakanaka nguva dzose kuchengetedza Linux system yako!
FSlint: Chimbo cheGI kuti uwane uye kubvisa twese mafaira
FSlint inokubatsira kutsvaga uye kubvisa zvinyorwa zvinyorwa, zvinyorwa zvisina chinhu kana mafaira ane mazita asina kururama. Iine mutezo-murairo pamwe ne GUI mode necheti yezvigadzirwa kuita mabasa akasiyana-siyana.
Kuti uise FSlint, tora mutemo uri pasi apa muTeminal.
Vhura FSlint kubva kuDash kutsvaga.
FSlint inosanganisira zvimwe zvingasarudzwa zvokusarudza kubva. Pane pane zvingasarudzwa kuti uwane mafairi akawandisa, akaiswa mapeji, mazita akashata, mazita okurwisana, mafaira emafaira, zvinyorwa zvisina zvazvinobatsira. Sarudza Tsvakurudzo Pati uye basa raunoda kuita kubva kuruboshwe rworuboshwe uye enda pa Tsvaga kuti uwane mafaira. Kana wamboitwa, unogona kusarudza mafaira waunoda kubvisa uye Susa.
Iwe unogona kuvhara pane chero faira zvinyorwa kubva pane tsvakurudzo yekutsvaga kuti uzarure iyo kana iwe usina chokwadi uye uchida kuongorora kaviri yacho usati waibvisa.
Unogona kusarudza Kutsvaga kutsvaga zvidimbu uko iwe unogona kutsanangura mitemo kuti usabvisa mamwe mafaira emafaira kana kusatora zvinyorwa zvisingatsvaki kutsvaga.
Zvinyorwa zvingaverengerwa7 Nzira Dzakadzika Dzakasununguka Pasi paUbuntu uye Linux Mint
FDUPES: tool GUI kuwana nekubvisa mafaira akawandisa
FDUPES iri murairo mutsara kushandiswa kuwana uye kubvisa zvinyorwa zvinyorwa muLinux. Inogona kunyora mairi mafaira mune imwe faira kana kuti nekudzoka mukati mefaira. Inobvunza kuti ndeipi faira yekuchengetedza usati wabviswa uye chisarudzo chinoputika chinokubvumira kubvisa zvose zvinyorwa zvinyorwa kuchengeta yekutanga pasina kukubvunza.
Kuiswa pa Debian / Ubuntu
Kuiswa pa Fedora
Kana wakamboiswa, iwe unogona kutsvaga mafaira akashandisa uchishandisa murairo uri pasi apa:
Nekutsvaga kutsvaga mukati mefaira, shandisa -r sarudzo
Izvi zvinongorongedza zvinyorwa zvinyorwa uye hazvidzidzise pachako. Iwe unogona kunyora zvinyorwa zvinyorwa kana kushandisa -d chisarudzo chekudzima.
Izvi hazvizogadziri chinhu pachako asi zvicharatidza zvose zvinyorwa zvinyorwa uye zvinokupa sarudzo yekubvisa mafaira imwe neimwe kana kusarudza bhanza kuti ribudise. Kana uchida kubvisa mafaira ose usingabvunzi uye kuchengetedza yekutanga, unogona kushandisa noprompt -N kuita.
FDUPES: kutsvaga uye kubvisa zvinyorwa zvinyorwa
Mumufananidzo wepamusoro, unogona kuona -d mirayiridzo inoratidza zvose zvinyorwa zviri mukati mefaira uye kukukumbira kuti usarudze faira yaunoda kuchengeta.
Kune dzimwe nzira dzakawanda uye zvishandiso zvekuwana uye kubvisa zvinyorwa zvinyorwa muLinux. Somunhu oga, ndinosarudza chikwata chemurairo reDUPUPES; Zviri nyore uye hazviiti zvinhu.
Iwe unobata sei nekuwana uye kubvisa zvinyorwa zvinyorwa mu Linux yako system? Titaurire mubhuku remashoko.
Nzira yekuwana nekudzima maDuplicate mafaera MuLinux Ubuntu
Bvisa zvakapetwa mafaera nefdupes
20 + Mahara Mabhuku Ekudzidza Linux Yemahara